Daafaca Chelsea Antonio Rudiger Oo Ka Hadlay Xiisaha Bayern Munich Uga Imaanaya
HomeWararka CiyaarahaDaafaca Chelsea Antonio Rudiger oo ka hadlay xiisaha Bayern Munich uga imaanaya
October 6, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Germalka, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Daafaca dhexe ee kooxda Chelsea Antonio Rudiger ayaa qirtay inay sharaf u tahay in lala xiriiriyo Bayern Munich laakiin uu diirada saarayo kaliya ka faa’ideysiga Blues.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa weli ballan qaadin inuu heshiis cusub u saxiixo Stamford Bridge wixii ka dambeeya xagaaga 2022 wuxuuna awoodi doonaa inuu kala hadlo heshiis hordhac ah kooxaha kale laga bilaabo Janaayo.
Kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich ayaa la saadaalinayay inay Rudiger dib ugu soo celin doonto dalkiisa sanadka soo socda, laakiin 28 jirkaan ayaan u oggolaan in maskaxdiisa ay warwareegto, inkastoo xiisaha Bavaria uu ku qancay.
Isagoo la hadlayay wariyeyaasha, Rudiger wuxuu yiri: “Dabcan [xiisaha Bayern] ayaa i sharaf ah oo ii caddeynaya inaan si sax ah wax u qabanayay. Laakiin ma ogola inaan naftayda ku mashquulo.
“Waxaa waajib igu ah kooxdayda inaan si fiican u soo bandhigo, waa inaan is muujiyaa ciyaar walba oo aanan u oggolaan in naftaydu ku mashquusho wararka xanta ah. ”
Rudiger ayaa daqiiqad kasta u ciyaaray Chelsea xilli ciyaareedkii 2021-22 ilaa iyo haatan, laakiin waxaa lagu soo waramayaa inuu weli isku khilaafsan yahay kooxda heysata Champions League heshiis cusub.